Textile Braille Akwa Tactile - Imewe Mmewe
Akwa Tactile Industrial Universal jacquard textile chere dị ka onye ntụgharị maka ndị ìsì. Ndị nwere ezigbo anya nwere ike ịgụ akwụkwọ a iji mụta usoro braille site na iji ya eme ihe na nke ọzọ: akwa. O nwere mkpụrụedemede, akara na akara edemede. Odighi agba agbakwunye. Ọ bụ ngwaahịa dị na ọkwa isi awọ dị ka ụkpụrụ nke enweghị nghọta. O bu oru ngo nke putara ihe n’etiti ndi mmadu ma gabiga ihe ndi ozo.
Aha oru ngo : Textile Braille, Aha ndị na-emepụta ya : Cristina Orozco Cuevas, Aha onye ahịa : Cristina Orozco Cuevas.
Ejiri akwa, akwa, udiri, usoro na akwa akwa
Akwa Tactile Cristina Orozco Cuevas Textile Braille